journal madagascar 0 Commentaire sept 18, 2018
« Ny 50 % ny vola miditra amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, mijanona any an-toerana hanasoavana ny vahoaka ka hanamboarana zavatra lehibe». Tsy natao ho fandalovan’ireo vola miditra ao amin’io seranan-tsambo io fotsiny i Toamasina fa mendrika ny higoka ny tombontsoa entin’izany seranana izany ny mponina ao, hoy ny kandida Mailhol laharana faha-34, nandritra ny fitsidihana nataony tany an-toerana. Ny zava-misy, mandeha aty Antananarivo ireo vola tafiditra ao amin’ity seranan-tsambo ity. Eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany indray, 50% ny harena an-kibon’ny tany trandrahany vahiny dia an’ny Malagasy fa ny 50% kosa no an’ny mpitrandraka, hoy hatrany izy. Noho izany, tsy hankinina amin’ny fambolena sy fiompiana intsony ny fampandrosoana an’i Madagasikara satria efa potiky ny dahalo ireo sehatra ireo. Ampy hampiakatra ny sandam-bola malagasy ho 100% ny harena an-kibon’ny tany voatrandraka ara-dalàna. Noho izany hidina 100% ny vidim-piainana, toy ny solika. Raha ny volamena fotsiny no voafehy, tsy misy marary mandoa vola any hopitaly intsony, hianatra maimaimpoana ny mpianatra, mitsahatra ny fangalarana sy ny asan-dahalo satria hisy orinasa betsaka. Ny vahiny no ao an-damosina tsy ahavitan’ny mpitondra hanao izany. Ity kandida laharana faha-34 ity no afaka hahatanteraka izany vina miantraika mivantana any amin’ny vahoaka, hoy ny talen’ny fampielezan-keviny, Paolo Raholinarivo.
« Izy irery no kandida amin’ireo 35 hafa afaka hampihavana ny Malagasy samy Malagasy, mpanao politika sy ny Malagasy ary hampihavana ny ny olombelona sy Andriamanitra amin’ny maha kristianina sady ray am-panahy azy », hoy ny talen’ny fampielezan-kevin’ny kandida Mailhol. Tsy fahavalontsika Malagasy ny Frantsay na dia mitaky ny « Iles éparses » bodoin’izy ireo aza ny pasitera Mailhol. Noho izany, tsy manam-pahavalo izy rehefa tonga eo amin’ny fitantanana ny firenena. « Ny fahavaloko dia ny fahantrana, kolikoly, fanondranana harem-pirenena an-tsokosoko, fanodikodinam-bolam-panjakana, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fangalarana tanin’ny Malagasy ».
Mahatonga ny krizy miverimberina eto Madagasikara ny kolikoly nataon’ny mpitondra nifandimby, ny fangoronan-karena izay tsy mijery vahoaka. Ho afaka izany krizy miverimberina izany raha miala amin’ireo ny mpitondra. Ny kandida Mailhol dia tsy hanaraka ny fanaon’ireo mpitondra teo aloha ireo . Azo antoka fa tsy hisy intsony izany eto Madagasikara. Nohamafisiny fa izy irery ihany no kandida tsy ho azon’ny fandrahonan’ireo firenena avy any ivelany satria tsy manana vola mipetraka any an-dafy izy, tsy misy tranony any. Ireo kandida mpanao politika ireo no manana an’izany ka azon’ireo firenena fatorana. Nihaona tamin’ny vahoakan’i Toamasina teny amoron-dranomasina ny kandida Mailhol laharana faha-34 ny alahady 16 Septambra 2018 lasa teo. Tonga maro ny vahoaka tamin’izany hetsika izany nihaino ny vinany ho an’i Madagasikara indrindra ny vina manokana ho an’i Toamasina.
‹ World trade center de Tana soutient le mouvement World Cleanup day	› PROMOTION H’AIKO : ViMa appuie les jeunes diplômés